डेढ अर्ब घोटालामा मुछिएको एनसीसी बैंकको वित्तीय अवस्था धरापमा ! — Motivate News
डेढ अर्ब घोटालामा मुछिएको एनसीसी बैंकको वित्तीय अवस्था धरापमा !
Posted on March 26, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौं – डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण घोटालामा मुछिएको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको वित्तीय अवस्था धरापमा परेको छ । बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा नाफा देखाइए पनि वास्तविक स्थितिमा भने बैंक नोक्सानमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो वित्तीय विवरणमा बैंक नाफामा गएको देखिए पनि बैंकले पुरानो खराब कर्जा ३४ करोड ६९ लाख रुपियाँ उठाएका कारण नाफामा देखिएको हो । तर बैंकको वास्तविक अवस्था भने नोक्सानमा रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
बैंकको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासमा भन्दा ३ सय ५६ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेर ३५ करोड ४५ लाख रुपियाँ पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्दा बैंकले रामो प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छ । तर खराब कर्जा उठाएकालाई नाफा भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यो तथ्यांकले बैंक नोक्सानमा परेको उनीहरूको दाबी छ ।
त्यस्तै बैंकले दोस्रो त्रैमासमा वित्तीय संस्थाको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी पनि ४३ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेर ५ करोड ८७ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा खुद ब्याज आम्दानी १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको थियो । जोखिम व्यवस्थापन कोषमा पनि ६ महिनाको अवधिमा १४ करोड ८२ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । जुन गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ६ करोड ५३ लाख रुपियाँ मात्र रहेको थियो । साथै बैंकको कोषको लागत ८ दशमलव १९ प्रतिशत र आधारदर ११ दशमलव ४५ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो ७६ दशमलव ४८ प्रतिशत छ । जोखिम व्यवथापन कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पनि दुई गुणाले बढेर अहिले निस्क्रिय कर्जा चार प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।
बैंकिङ समूहमा सबै भन्दा बढी निस्क्रिय कर्जा भएको बैंक मध्ये एनसीसी बैंक अग्रस्थानमा आउँछ । उल्लेखित विवरण एनसीसी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य जोखिममा रहेको प्रमाणित गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तीय अवस्था हेर्दा एनसीसी बैंक अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ ।
असार ३२,ललितपुर- ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि चार अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाले आज कार्यालय परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले दोस्रो नगरसभाबाट पारित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरपालिकाको...